Imba diki yemagnomes, elves kana fairies | Mhizha On
Imba diki yemagnomes, elves kana fairies
DonluMusical | | Decoration, Mhizha yevana
Idzo dzimba dzemagnomes, fairies kana elves vagara vaindifarira kwazvo munyaya dzevana uye ngano. Vane mashiripiti mukona yega yega uye vakomana nevasikana vafungidzira kuva neyako yekugara. Mune ino posvo ini ndiri kuzokudzidzisa iwe kugadzira iyi diki imba ye kadhibhodhi mapepa ekuchimbuzi mapepa Iyo yaunogona kushandisa sebhokisi remawiti, kuchengetedza zvinhu kana kungoashongedza.
1 Zvishandiso zvekugadzira iyo gnome imba
2 Gnome imba yekuita maitiro
Zvishandiso zvekugadzira iyo gnome imba
Kutenderedzwa kwepepa rechimbuzi
Ruva uye denderedzwa eva rubber punch
Gnome imba yekuita maitiro
Edza kureba kwekadhibhodhi roll nemutongi uye cheka tambo inovhara chidimbu chose.
Wobva waisa imwe glue yekunamatira uye namatidza bhandi repepa zvakanyatsonaka kuitira kuti ive yakatwasuka.
Nerubatsiro rweiyo cd dhonza denderedzwa pane jira dzvuku uye ucheke.
Cheka kota yedenderedzwa dzvuku kukwanisa kugadzira denga remba.
Namatira mumwe mugumo pamusoro peumwe sezvaunoona mumufananidzo uye ndizvozvo tichava nedenga yeimba yedu diki, fambisa micheto zvakanaka.
Nechihomba chibhakera chena folio denderedzwa Ndiri kuzogadzira madenderedzwa ekushongedza denga uye riite kunge howa.
Tora cd zvakare uye cheka denderedzwa mune yakasvibira evha rabha Nerubatsiro rwechigero chepinking kuitira kuti micheto iri mumafungu, asi kana usina, hapana chinoitika, unogona kuzviita nesikisi yakajairwa.
Neruva gomba chibhakera gadzira mashoma uye unamatira iwo kutenderera denderedzwa, yakagoverwa zvakanaka.
Unogona kuzviita a nongedzera nemutsvuku pakati kuti dziwedzere kunaka.
Kugadzira hwindo, cheka zvidimbu zvidimbu zveeva rabha uye ubatanidze sezvaunoona pamufananidzo, wobva wadimbura izvo zvasara uye tichava nehwindo takagadzirira.
Cheka rectangle mune brown eva rabha iyo ichave iri gonhi, iwe unogona kugadzira ruzivo nebrown marker.
Kana tangova nemusuwo uye hwindo, Tichava namatira pamutumbi wemba.
Isu tapedza, taizongogara chete namatidza denga pamusoro pechiso uye takagadzirira !! Ndinokurudzira kuti usanamatidze chikamu chepazasi cheimba kuchikamu chegirinhi nekuti nenzira iyoyo unokwanisa kuchisimudza nekuchengeta zvinhu zvidiki mukati zvakaita semateneti, mhete, zvishandiso kana chero chaunoda.
Uye kusvika parizvino pfungwa yanhasi, ndinotarisira kuti wakaifarira, kana ukazviita, usakanganwa kunditumira pikicha kuburikidza nechero yemasocial network.
Tokuonai pane inotevera hunyanzvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » Decoration » Imba diki yemagnomes, elves kana fairies
Chikwangwani "BOO" yeHalloween
Shangu dzevana dzeMucheche Shower